कपिलवस्तुमा ६ जनालाई क्‍वारेन्टाइनमा राखियो – Karnalikhabar
कपिलवस्तुमा ६ जनालाई क्‍वारेन्टाइनमा राखियो
कपिलवस्तु : कोभिड-१९ कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको भारतका विभिन्न स्थान र साउदी अरेवियाबाट भारतको बाटो हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका ६ जनालाई स्थानीय प्रशासनले क्वारेन्टाइनमा राखेको छ। भारतको दिल्लीबाट कपिलवस्तु भित्रिएका दुई छोरीसहित आमालाई तौलिहवास्थित महेन्द्र आधारभूत विद्यालयमा राखिएको छ। कपिलवस्तु नगरपालिका-३ का ४३ वर्षीय इन्दिरा देवकोटा र उनकी दुई छोरीहरु मुना देवकोटा र कविता देवकोटालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको कपिलवस्तु अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. किशोर बन्जाडेले बताए।
यसै गरी मुम्बईबाट आएका दुई जना र साउदी अरेवियाबाट आएका एक जनालाई पनि सोही क्वारेन्टाइनमा राखिएको डा. बन्जाडेले बताए। मुम्बईबाट आएका यशोधरा गाउँपालिका-३ का २८ वर्षीय साबुद्दिन खान र यशोधरा गाउँपालिका-७ सोमडीहका कृष्ण गोपाल कलवारलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। साउदी अरेवियाबाट भारतको बाटो हुँदै आएका यशोधरा गाउँपालिका-७ सोमडीहका सत्य राम कलवारलाई पनि थप चेकजाँचका लागि क्वारेन्टाइनमा राखिएको डा. बन्जाडेले बताए। क्वारेन्टाइनमा राखिएका ६ जनालाई केही दिनको निरन्तर चेकअप र स्वास्थ्य अवस्थाको पहिचानपछि घर फर्काउने वा थप प्रक्रिया अघि बढाउने टुंगो लाग्छ, डा. बन्जाडेले भने ‘कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको स्थानबाट आएकाले निगरानीका लागि राखिएको हो।’
तौलिहवामा रहेका २ जनालाई भने मंगलबार घर फर्काइएको छ। ६ दिनसम्मको निरन्तर चेक अप र स्वास्थ्य परीक्षणबाट उनीहरुमा कोरोना भाइरस संक्रमणको थप लक्षणहरु नभेटिए पछि घर मै स्वक्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी रिफर गरिएको डा. बन्जाडेले बताए।
अघिल्लो - गाैरीफन्टा नाकामा सीमामा रोकिएकाहरु प्रहरीलाई ढुंगा हान्दै नेपाल छिरे
इटलीमा एकै दिन ६०१ र स्पेनमा ५३९ जनाले ज्यान गुमाए - पछिल्लो